Yogurt: fampahalalana momba ny fanaovana yogourt, sns-BALLYA
Tena azo antoka ve ny yaourt vita an-trano?
Sakafo ara-pahasalamana fantatry ny mpanjifa kokoa ny yaourt. Saingy ny ankamaroan'ny olona dia manahy momba ny vokatra ao amin'ny supermarket, ka noho izany dia hanao yogourt amin'ny alàlan'ny milina yaourt ao an-trano izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny sakafo an-trano fiarovana dia tsy tsara toy ny famokarana tsy tapaka ny vokatra. Ka manao ahoana ny yaourt namboarina? Namidy ireo yaourt […]
Iza amin'ireo no tsara kokoa? Ronono sa yaourt?
Niresaka momba ny olana rehetra sendra anay izahay nandritra ny fihenan'ny lanja, fa misy kosa ny ankizivavy tsy mahita an'izany ary mahita vaovao sy olana ara-tantara. Ka hanampy anao hampiditra. Ny tianay hampifangaroana anio dia ny fahalalana ireo vokatra vita amin'ny ronono, izay manana taha ambony indrindra momba ny fanadihadiana tato ho ato. Inona ireo […]
Desambra 19, 2019
Inona no sakafo tsy tokony hohanina miaraka amin'ny yaourt?
Ny yaourt dia zava-pisotro mahazatra amin'ny fiainana. Tsy hoe manana tsiro tsy manam-paharoa fa manana lanja mahavelona mahavariana ihany koa. Noho ireo teboka roa ireo no nanomboka nihinana yaourt ny olona isaky ny afaka sy tamin'ny fomba maro samihafa. Tsy haiko hoe oviana no nanomboka nihinana yaourt niaraka tamin'ny zavatra ny olona. Na dia yaourt aza […]
Ahoana ny fampiasana yaourt hanasitranana ny fitohanana?
Mafana be ny fahavaratra, ary mora tezitra ny olona, ​​be ny labiera sy gilasy ary crayfish. Ny soritr'aretin'ny fitohanana dia tsy azo ihodivirana. Betsaka ny olona manantena ny hiatrika an'io olana io amin'ny fisotroana yaourt. «Probiotika velona» na «fanatanjahan-tena tsinay» no iantsoana azy? Safidy misaina misotro yaourt rehefa fitohanana! […]
Azo atao hangover ve ny yaorta?
Amin'ny maha vokatra vita amin'ny ronono azy, ny yaourt dia hangover ihany koa. Marina izany. Safidy mety ny misotro yaourt rehefa misotro. Tadidinao ve? Azo atao hangover ve ny yaorta? Ny fisotroana yaorta vitsivitsy aorian'ny fisotroana dia mety hilalao ny hangover ary hiaro ny mucosa vavony. Yogurt koa no "hangover" tsara indrindra ho an'ny hangover yaourt, izay afaka manafoana […]
Inona no karazana yaorta mety amin'ny saron-tava yaorta?
Betsaka ny fampiasana yaourt mahafinaritra, ny iray amin'izany dia ny fanaovana sarontava. Ny saron-tava yaorta dia afaka mandena ny hoditra ary mitana anjara toerana amin'ny fotsifotsy sy freckle. Fa misy karazana yaourt maro. Alohan'ny hanaovana saron-tava yaourt dia mety olona maro no manintona ny yaourt tsara indrindra ho an'ny saron-tarehy. Noho izany, ao amin'ny […]
Tsaho ny yaourt 6! Tandremo sao voambaka!
Tsaho enina momba ny fisotroana yaourt: 1. Mahasoa ny mandevona rehefa misakafo. Amin'ny mason'ny olona maro, ny "fanampiana fandevonan-kanina" dia iray amin'ireo asan'ny yogourt tena ilaina amin'ny fahasalamana, noho izany dia aleony ihany koa ny yaorta rehefa misakafo. Ny yaourt dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny moto amin'ny gastrointestinal sy ny famoahana ny ranon-kanina. Ny fisotroana matetika dia tena manampy amin'ny fanatsarana ny fandevonan-kanina. Na izany aza, […]
Tsara ve ny misotro yaourt tsy tapaka mandritra ny fadimbolana?
Ny yogourt dia tsara tsiro manokana, ka tian'ny mpanjifa izany. Ny yaourt dia vita tamin'ny bakteria asidra laktika. Tany Bulgaria no niandohany. Manankarena proteinina sy bakteria asidra laktika, ary kalsioma sy karazana vitamina isan-karazany, toy ny vitamina b1, vitamina B2, ary vitamina B6. Inona avy ireo soa azo avy amin'ny fisotroana yaourt tsy tapaka? […]
Rahoviana no fotoana mety hisotroana yaourt ho an'ny vehivavy?
Yaorta mamy sy marikivy miaraka amin'ny tsiro manankarena sy ny zava-misy marina momba ny sakafo. Na izany aza, maro ny olona tsy mahalala fa tokony hitandrina ny fotoana ananantsika yaorta. Ny fisotroana yaourt amin'ny fotoana mety dia mety hampitomboina ny anjara asan'ny yaourt amin'ny ronono. Misotroa yaourt bebe kokoa, tombony bebe kokoa Ny yogurt dia vokatra vita amin'ny ronono vita amin'ny ronono madio na ronono vaovao, avy eo nampiana […]
Fantatrao ve ny lanjan'ny yaourt Xinjiang?
Amin'ny maha zava-pisotro tena ilaina amin'ny fiainantsika isan'andro, ny yaourt dia manana lanja ara-tsakafo avo kokoa noho ny vokatra vita amin'ny ronono tsotra. Tsy vitan'ny hoe mandevona ny tsinay ihany fa afaka manapotsitra ny lanja very! Fa ny yaourt dia manana fomba fihinana isan-karazany, izay fantatro ihany. Ny fomba fisotroana sivy tsara indrindra amin'ny yaourt 1. Fandoroana ra sy tavy = yaorta + volontany […]
Afaka mihena ve ny yaourt Apple?
Atambaro ny sakafom-boankazo yaorta mahafinaritra amin'ny fomba fanazaran-tena mety hanampiana ireo olona matavy loatra. Ny sakafo yaourt Apple dia mandaitra. Ny fampiasana yaorta paoma hampihena ny lanja amin'ny sakafo isan'andro dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny metabolisma amin'ny vatanao. Ny fiakaran'ny haavon'ny metabolika dia midika fihenan-danja haingana. Ny tombony azo avy amin'ny yaourt an'ny paoma yaorta Apple dia vokatra vita amin'ny ronono izay manan-karena fosforôra, proteinina ary […]
Fa maninona no manify ny yaourt?
Sakafo ho an'ny rehetra ny yaourt. Indraindray ny olona dia mihevitra azy io ho zava-pisotro. Manankarena zava-misy mahasalama sy mahavelom-bolo mahavelona azy kokoa ny yaourt, koa matetika ny olona dia misotro yaourt. Indraindray ho hitanao fa simba ny yaourt amin'ny hafanan'ny efitrano, tapaka ve izany? Androany no holazaiko anao ny antony, ary hatoroko anao ny fomba hanavahana ny […]